Abakhiqizi be-ZTE ONU | I-China ZTE ONU Factory & Abahlinzeki
I-EchoLife HG8546M, i-optical network terminal (ONT), iyisango lasekhaya elisezingeni eliphezulu kusisombululo seHuawei FTTH. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-GPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikeziwe kubasebenzisi basekhaya nabakwaSOHO. IH8546M inikezela ngamachweba we-1 * POTS, 1 * GE + 3FE port-adapting Ethernet port, kanye ne-2 * port ye-Wi-Fi. I-H8546M ifaka amandla wokudlulisa ukusebenza okuphezulu ukuqinisekisa isipiliyoni esihle kakhulu ngezinsizakalo zevidiyo zeVoIP, Internet ne-HD. Ngakho-ke, i-H8546M inikezela ngesixazululo esiphelele se-terminal kanye namakhono asekela imisebenzi esekwe ekusetshenzisweni kwe-FTTH.
I-ZTE F660 V5.2 International Version ONT
I-ZTE ZXHN F660 V5.2 FTTH iyi-GPON Optical Network Terminal eyenzelwe isimo se-FTTH. Inikeza ababhalisile abacebile, abemibalabala, abahlukile, imisebenzi elula futhi enethezekile yokudlala kathathu kufaka phakathi izwi, ividiyo (i-IPTV / CATV) nokufinyelela kwe-inthanethi okusheshayo. isekela ukufakwa kwedeskithophu, ukufakwa kodonga nokufakwa kwikhabethe yenethiwekhi. Le modeli yenzelwe izimo ze-FTTH. Ngobuchwepheshe bayo bokungena ekhaya, i-ZTE F609 FTTH imele isikhungo senethiwekhi entsha yasekhaya ehlangabezana nezidingo zesevisi ezigcwele zabasebenzisi abasezingeni eliphakeme ngokuletha i-Intanethi eshesha kakhulu, izwi levidiyo esezingeni eliphakeme (i-IPTV), ukufinyelela okungenantambo okungenantambo kanye izinsizakalo zokugcina inethiwekhi ezilula.
I-ZTE F660 V6.0 GPON ONU 1GE + 3FE + Izimbiza + WIFI
I-F660 V6.0 ihlinzeka ngamachweba ama-1 POT, 1GE kanye ne-3FE auto-adapting Ethernet port, i-port eyodwa ye-USB, kanye ne-Wi-Fi port eyodwa. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-GPON, ukufinyelela kwe-ultra-broadband kunikeziwe kubasebenzisi basekhaya nabakwaSOHO. I-F660 ifaka amandla wokudlulisa ukusebenza okuphezulu ukuqinisekisa isipiliyoni esihle kakhulu ngezinsizakalo zevidiyo zeVoIP, Internet ne-HD.
I-ZTE ONU F660 v8.0 1GE + 3FE + Izimbiza + ze-USB + WiFi (5dibi)
I-ZTE GPON ONU ZXA10 F660 Inguqulo 8.0 FTTO noma i-FTTH ONT ene-1GE + 3FE + 1POTS + USB + WIFI.
I-English Firmware, i-English QIG, i-English LED mark, i-SIP VOIP protocol, yokusekela
Umsebenzi we-DHCP, Sekela abasebenzisi abaningi.
I-ZXA10 F660 iyi-GPON Optical Network Terminal eyenzelwe i-HGU (i-Home Gateway Unit)
isetshenziswe kwisimo se-FTTH, esisekela umsebenzi we-L3 ukusiza obhalisile akhe ikhaya elihlakaniphile
inethiwekhi. Inikeza obhalisile ocebile, onemibala, owenzelwe yena yedwa, elula futhi enethezekile
izinsizakalo zokudlala kathathu kufaka phakathi izwi, ividiyo (i-IPTV) nokufinyelela kwe-inthanethi okusheshayo. Futhi
isekela IEEE 802.11b / g / n evumela obhalisile ukuthi ajabulele i-inthanethi nge-wifi. Inokuncane,
ukubukeka okuhle nokuluhlaza, inzuzo yokonga amandla. Kusetshenziswa umthetho olandelwayo we-OMCI, izindleko ze-O & M
kungancishiswa ngempumelelo ngokusekela ukuhlinzekwa kwensizakalo ekude, ukuxilongwa kwamaphutha okuhlakaniphile
nemisebenzi yezibalo zokusebenza.
1.Plug-and-play (PnP): Izinsiza ze-Intanethi, i-IPTV neVoIP zingafakwa ngokuchofoza okukodwa ku-NMS futhi ukumiswa kwesayithi akudingeki.
Ukuxilongwa kwe-2.Remote: Ukuthola amaphutha okukude kuqaliswa ukuhlolwa kwe-loop-line yamachweba we-POTS, ukulingisa ikholi nokulingisa kwe-PPPoE okuqalwa yi-NMS.
Ukuqapha kwe-3.Link: Ukutholwa kwesixhumanisi se-E2E kutholakala kusetshenziswa i-802.1ag Ethernet OAM.
Ukudluliswa kwejubane eliphezulu: Ukudluliswa kwezinga lomugqa we-GE esimeni sokuvala kanye nokudluliswa kwe-900 Mbit / s kusimo se-NAT.
5.Ukulondolozwa kwamandla kweGreen: 25% ukusetshenziswa kwamandla kugcinwa ngohlelo oluhlanganiswe kakhulu kwisisombululo se-chipset (SOC), lapho, i-chip eyodwa ihlangana namamojula we-PON, izwi, isango kanye ne-LSW.
Imishini yochungechunge lwe-ZTE gpon ont F663NV3A GPON ONT yenziwa futhi yathuthukiswa yinkampani ye-zte, engumholi ku-FTTH / FTTO broadband access network field. Zilawuleka kahle ngokungezwe ngezici ezinjenge-bandwidth ephezulu, ukuthembeka okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla aphansi futhi kwanelisa izidingo zabasebenzisi zokufinyelela i-broadband, izwi, idatha nevidiyo njll.
I-ZTE GPON ONU F663NV3A ene-1GE + 3FEports + 1 * imbobo yefoni + i-wifi, enamantongomane ama-2 athole inzuzo engenantambo
I-ZTE GPON ONU 4FE + 2POTS + WIFI ONU
I-ZTE ZXHN F660 V5 GPON ONU NE-4FE + 2POTS + WIFI ye-Router ZTE F660 iyi-GPON Optical Network Terminal eyenzelwe isimo se-FTTH. Ixhasa umsebenzi we-L3 ukusiza obhalisile akhe inethiwekhi yasekhaya ehlakaniphile.
Inikeza ngezinsizakalo ezicebile, ezimibalabala, ezizimele, ezilula nezintofontofo kufaka phakathi izwi, ividiyo (i-IPTV) nokufinyelela kwe-inthanethi okusheshayo.
I-ZTE GPON ONU F670L 4GE + Izimbiza + ezimbili band WIFI
I-ZXHN F670L yi-ITU-T G.984 ne-ITU-T G.988 ehambisanayo i-optical network terminal (ONT) eyenzelwe abasebenzisi basemakhaya aphezulu.Ifaneleke kahle kwizimo ze-fiber ekhaya (FTTH) futhi isekela ideskithophu ukukhweza.
Ehlangothini lwenethiwekhi, isekela i-2.488 Gbps downlink ne-1.244 Gbps uplink. Ehlangothini lomsebenzisi, inikeza amachweba amane we-GE, ama-POTS owodwa
amachweba, ichweba elilodwa le-USB 2.0, ne-Wi-Fi 802.11n 2 × 2 2.4GHz ne-802.11ac 3 × 3 5GHz ngasikhathi sinye. Ngokusebenzisa i-ZXHN F670, abasebenzisi bekhaya bangakwazi
finyelela idatha, izinsizakalo zevidiyo nezwi, futhi ujabulele ukuxhumeka kwe-inthanethi okusheshayo.
Intengo ye-Huawei Olt, Optical Fibre Module, IHuawei Qsfp +, I-Sfp C ++, Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Xfp Transceiver,